मकैका नयाँ बीउ सिफारिसको तयारी | चितवन पोष्ट दैनिक
मकैका नयाँ बीउ सिफारिसको तयारी
२०७० पुष १२, शुक्रबार ०३:१८ गते
भरतपुर । राष्ट्रिय मकैबाली अनुसन्धान कार्यक्रम रामपुरले दुई थरी नयाँ मकैका हाइब्रिड जात सिफारिस गर्ने तयारी गरेको छ । प्रयोगशाला परीक्षणपछि किसानका खेतबारीमा लगाउन बहुउपयोगी हुने भएपछि सिफारिसको तयारी गरिएको राष्ट्रिय कृषि अनुसन्धान परिषद् नार्कका वरिष्ठ वैज्ञानिक टीकाबहादुर कार्कीले बताए ।
वैज्ञानिक कार्कीका अनुसार आरएमएल ३२– आरएमएल १७ र आरएमएल ४– आरएमएल १७ जातका मकैका नयाँ जात सिफारिस गर्न लागिएको हो । यसअघि सिफारिस भएका रामपुर हाइब्रिड २ र गौरव नामका मकैका हाइब्रिड बीउले सोचेअनुसार उत्पादन दिन सकेको थिएन । यो बीउ अहिले लगभग हराइसकेको छ ।
‘सिफारिसको तयारीमा रहेका दुई जातका हाइब्रिड मकैको उत्पादक¤व बढ्नेमा हामी विश्वस्त छौँ’, राष्ट्रिय मकैबाली अनुसन्धान कार्यक्रम रामपुरका संयोजक डा. केशवबाबु कोइरालाले भने ।
डा. कोइरालाका अनुसार नयाँ सिफारिस गर्न लागिएको मकैको बीउ नेपाली हावापानी, माटो र जैविक विविधता सुहाउँदो छ । उत्पादक¤वका हिसावले किसानमैत्री भएकाले उल्लेखित नयाँ जातका बीउबाट किसानहरु सन्तुष्टि हुने उहाँको भनाइ छ ।
उल्लेखित बीउबाट प्रतिहेक्टर ७.५ मेट्रिक टन उत्पादन लिन सकिने वैज्ञानिक कार्कीले जानकारी दिए । पुराना हाइब्रिड बीउ लगाएर भनेजति उत्पादक¤व पाउन नसकेका किसानहरु नयाँ जातका मकै उत्पादनबाट भने खुसी हुने वैज्ञानिकहरुले विश्वास लिएका छन् ।
त्यस्तै, स्थानीय जातका मकैका बीउहरु हराउँदै गएको बताउँदै वैज्ञानिक कार्कीले किसानहरुको रोजाइअनुसार स्थानीय मकै र उन्नत मकैबीच क्रसिङ गराएर स्थानीय मकैको गुण, विशेषता मर्न नदिन नयाँ जातका मकैको बीउ उत्पादनको तयारी भइरहेको जानकारी दिए ।
यसका लागि कर्णाली र आसपासका जिल्लाहरुबाट स्थानीय जातका मकैका बीउ ल्याई प्रयोगशाला परीक्षण गर्ने काम भइरहेको छ । वैज्ञानिकहरुले नयाँ प्रविधिको अनुशरण गरेपनि प्राङ्गारिक मलको प्रयोग भने भरपुर मात्रामा हुनु आवश्यक रहेको किसानहरुलाई सुझाएका छन् ।
वैज्ञानिकहरुको अनुसार अहिले देशभर नै ९० प्रतिशत हाइब्रिड बीउ लाउने गरिएको छ । त्यसमा पनि ९० प्रतिशत विदेशी कम्पनीका मकैका बीउ रहेका छन् । हिउँको समयमा हाइब्रिड मकै बढी लगाइन्छ । नेपालमा ७० हजार हेक्टरमा हिउँमा मकै लगाउने गरिन्छ ।
उत्पादक¤वको हिसाबले उच्च पहाडी भागमा गणेश २, मध्ये पहाडमा मनकामना १, २, ३, ४, ५ र ६ जातका उन्नत मकै लगाउने गरिएको छ । त्यस्तै, तराईमा भने रामपुर कम्पोजिट, बसन्त र अरुण १, २, ३, ४ जातका मकै लगाउने गरिएको छ ।
मकैखेतीलाई आधुनिक कृषि प्रणाली र प्रविधिसँगै अघि बढाउन किसानहरुमाझ नयाँ प्रविधिका बारे जानकारी दिने उद्देश्यले विभिन्न गोष्ठी, सेमिनार र भ्रमणका कार्यक्रम हुँदै आएको मकैबाली अनुसन्धान कार्यक्रमका वैज्ञानिक घनश्याम भण्डारीले जानकारी दिए ।
नेपालमा अहिले कुल ८ लाख ७१ हजार ३८७ हेक्टर क्षेत्रफलमा मकैखेती हुँदै आएको छ । जसबाट २१ लाख ७९ हजार ४१४ मेट्रिक टन उत्पादन हुने गरेको छ । २.५ मेट्रिक टन प्रतिहेक्टर मकैको उत्पादक¤व रहेको छ ।
प्रदर्शनीमा राखिएका मकैका फरक प्रजातिका बीउहरु ।